जेठाजु बुहारी काण्ड: भाइको श्रीमती दाजुले रातारात भगाइदिए, प्रहरीले दुबैलाइ समातेपछि भाइ खुसीले गदगद (भिडियो सहित) – Nepali Taja Khabar
ह’रेक दिन नराम्रा खबरहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन । कहिले ह त्या कहिले आ त्म ह त्या कहिले चोरी त कहिले लुटपाट । संकटकाल सकिएपछि शान्त बनेको नेपालमा
कहिलेकाही नसो’चेको घ’टना सुन्नु पर्दा सबै नेपालीहरुलाई दुखी बना’उदै आएको छ । झा’पामा फेरि अर्को सोच्नै नसकिने घिनलाग्दो घ’टना घटेको छ । श्रीमान १५ दिन कतै काम गर्न जादा एक परिवारमा जेठाजुले बुहारी भगाएका छन्।
धर्म चाहार नाम गरेका पिडित युवा मिडियामा आएर आफ्नो श्रीमती दाइले भगाएको भन्दै आफ्नो गुनासो पोखेका छन् । ब.ला.त्कार गरेको आरोपमा ८ बर्ष जेल बसे’र आए’का माइला दाजुले आफ्नी
श्रीमती लिएर १ महिना अगाडी बाट बेपत्ता भएको जनाएका छन् । उनले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए’का थिए । अहिले भर्खरै जेठाजु बुहारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तल भिडियोमा जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोला । भिडियो अन्त्यमा राखिएको छ
थप समाचारद भ्वाइसका ट्याक्सी चालक कर्ण राजकी आमा अस्पतालको आइसीयुमा मूत्युसंग लड्दै ! अस्पताल पुग्दा रुदै भन्छिन…
द भ्वाइसका ट्याक्सी चालक कर्ण राजकी आमा अस्पतालको आइसीयुमा मूत्युसंग लड्दै ! अस्पताल पुग्दा रुदै भन्छिन… (भिडियो)
सम्बन्धमा शंका।।।।।। पुरा भिडियो हेरेर केहि प्रक्रिया दिनु होला।।